Ko kushanya kuchaita musangano waTrump naKim Jong-un kuitike?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Ko kushanya kuchaita musangano waTrump naKim Jong-un kuitike?
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • North Korea Kuputsa Nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
trump kim zhizha 2019
Tourism inogona kuve kiyi yekumutsiridza hurukuro pakati peNorth neSouth Korea. North Korea nguva pfupi yadarika yakavhura nzvimbo nyowani yemakomo ichiiti "chiratidzo chebudiriro yazvino."
Nyika Isolated inoona kushanya senzira yekuwana mari inodikanwa yekune dzimwe nyika uye nzira yekubata neSouth.
Tourism iri pakati pezvishoma zvinhu zvisati zvabvumidzwa.
Mutungamiri weSouth Korea, Moon Jae-in weSouth Korea neChipiri akadaidzira kuchinjana kwehupfumi neNorth Korea, kusanganisira kubvumidza kushanya ikoko nevashanyi vekuSouth Korea, kubatsira kubvisa kusagadzikana uye kukurudzira North kuti itangezve hurukuro neUnited States.
Mutungamiri weNorth Korea, Kim Jong-un uye Mutungamiri weAmerica VaTrump vakatadza kuenderera mberi nemisangano yavo nekuda kwekusiyana.
North Korea yatotaura kare kuti ichagamuchira vashanyi vanobva kuSouth.
Hurumende yaKim Jong-un yatanga kukurudzira vamwe vashanyi vekunze.
Kudyidzana pakati pevashanyi vekunze uye vanhu veko kwakagara kwakadzorwa zvakanyanya. Zvisinei, kubva pamifananidzo yakaonekwa paInternet uye humbowo kubva kune vafambi kuenda kuNorth Korea, izvo zvinorambidzwa zvinoita kunge zvakazorora zvishoma mumakore mashoma apfuura. Kubva muna Ndira 2013, vatorwa vanogona kutenga SIM kadhi kuPyongyang airport, kupa mukana wekufona kwepasi rese.
Zvese zvekushanya zvakarongedzwa neimwe yenzvimbo dzinoverengeka dzehurumende dzinoshanya, kusanganisira Korea International Travel Company (KITC), Korean International Sports Travel Company (KISTC), Korean International Taekwondo Tourism Company (KITTC) uye Korean International Youth Travel Company (KIYTC)
Sandals Resorts Executive Sachigaro Akapihwa Vechidiki Vatungamiriri ...
Kudengenyeka kwenyika muKrete | Kudengenyeka kwenyika muKarpathos: A ...
Jamaica Tourism Gurukota Inorumbidza Management yeCOVID-19 ...
CDC: Chero mushonga unogamuchirwa neWHO wakanakira kupinda kweUS
Seneti yeUS yakurudzira kubata kumwe kunzvera nezvekushandisa kwendege kwe ...
WTTC inopindura kurudziro dzazvino kubva kuEU
Vols kubva kuna Sharm el-Sheikh kuenda kuMoscow Domodedovo ...
Tourism Seychelles neQatar Airways Goverana Nyowani ...
Mazana akaburitswa Kubva Mukutsamwa Sardinia Wildfires se ...
10 ngochani-inoshamwaridzika yekushanya nzvimbo muUS uye kwakatenderedza ...
Kana Muchinda weSaudi Crown uye PM weSpain vachitaura ...
Mozambique, Chamhembe Afrika, Cape Verde, Moroko, Zambia ...
Uganda Inotangisa Kuratidzwa Kweshiri dzemuAfrica kechina - Yakakura...
Norway inogumisa zvese COVID-19 zvirambidzo, inodzokera ku ...
Paradhiso Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas ...
Prague Airport Board of Directors inosarudza Sachigaro mutsva
UNWTO enda kuSaudi Arabia paKubata: Secretary-General ...
UK Kufamba neKushanya: COVID Impact Report
Dzivisa Waini Kunetseka. Fara uye Unwe Bordeaux Les ...
UK Zvino Inosimudza Rwendo Rwokuchengetedza Kudzivirira Zvisiri-Zvakakosha ...
Iine itsva COVID-19 kesi pasi, Bali inogona kuvhurazve ku ...
Magamba eWTN anobva kunyika zana nemakumi maviri nesere dzinoda Kenya: World Travel...
Nyamavhuvhu Pride mhemberero dzinotonga muMalta, dzakavanzika ...
COVID-19 yakarongedzwa kudzvinyirira / kudzima matanho ...
Moderna CEO: COVID-19 denda rinopera pakati-2022
World Tourism Organisation (UNWTO) ine mukana mutsva ...